Man United Oo Liverpool & Man City Ku Garaacday Saxiixa Xidiga Xulka Portugal Ee Bruno Fernandes. - Gool24.Net
Man United Oo Liverpool & Man City Ku Garaacday Saxiixa Xidiga Xulka Portugal Ee Bruno Fernandes.
June 10, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Manchester United ayaa heshiis la gaadhay xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes waxayna hadda Red Devils saxiixa 24 sano jirkan ku garaacaysaa kooxaha ay Premier league ku xifiltamaan ee Liverpool iyo Manchester City.
Radio Rossonera oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa lagu shaaciyay in Mancheser United ay heshiis la gaadhay Bruno Fernandes isla markaana laga shaqaynayo faah faahinta dhamaystirka heshiiska uu Old Trafford ugu soo biirayo.
Bruno Fernandes ayaa xalay xulka qarankiisa Portugal ugu soo bilawday finalkii UEFA Nations league wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii bandhiga fiican sameeyay laakiin waxa uu hadda u muuqdaa mid ku soo jeeda Old Trafford.
Bruno Fernandes ayaa bandhig cidwalba ka yaabiyay waxa uu xili ciyaareedka dhamaaday ka soo sameeyay kooxdiisa Sporting Lisbon oo uu ugu soo lug yeeshay in ka badan 50 gool oo iskugu jira goolal uu dhaliyay iyo gool caawin uu sameeyay.
Laakiin Bruno Fernandes ayaa dhawaan waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in uu jecel yahay kooxda Liverpool isaga oo cadeeyay in ku biirista Man City uu ka jecel yahay in uu Liverool ku biiro.
Balse Manchester Untied oo xiliyadii ugu danbeeyay dadaal badan ku bixisay saxiixa Bruno Fernandes ayay hadda wararku sheegayaan in ay 70 milyan gini kula soo wareegayso xidiga ay kula tartamayeen Man City iyo Liverpool.
Mancheser United oo dhawaan ku dhawaaqday heshiiska Daniel James oo ay kala soo wareegtay kooxda Swansea City, ayaa hadda u muuqata in ay ku guulaysanayso dagaalkii loogu jiray saxiixa Bruno Fernandes.
Wargayska The Sun oo isna England ka soo baxa oo hadda daabacay in Man United ay heshiis la gaadhay Bruno Fernandes ayaa lagu sheegay in mar haddii uu soo dhamaaday finalkii UEFA Nations League in ay Uited heshiiska xidigan soo bandhigi karto.
Si kastaba ha ahaatee, waqtiyada soo socda ayaa la filayaa in xog faah faahsan laga heli doono heshiiska hadda la shaaciyay in ay Man Uited la gaadhay xidiga Sporting Lisbon iyo xulka Portugal ee Bruno Fernandes.